बाग्मती पछि चक्रपथ सफाई अभियान प्रारम्भ ! - Green City Hospital
बाग्मती पछि चक्रपथ सफाई अभियान प्रारम्भ !
बैशाख २, काठमाडौँ – बागमति सफाई अभियानमा सक्रिय रुपामा क्रियाशील भएका अभियानताहरुले चक्रपथ सफाई अभियान पनि थालेका छन
चक्रपथको बढ्दो फोहोरलाई ध्यानमा राखी बागमति सफाइमा सक्रिय रुपमा क्रियाशील अभियानताहरु र स्थानीय बासन्दिाहरु सहित करीब ५ सयको सहभागिता भएको अभियानको शहरी बिकास मन्त्री अर्जुन नरसिह केसीले उदघाटन गर्नुभएको हो
चक्रपथ सफाइ अभियानको सयोजन गरेका ग्रिनसिटी अस्पतालका अध्यक्ष एवं बागमति सफाई अभियन्ता लोकबहादुर टण्डनले शनिबार् मात्रै १० टन फोहर् संकलन गरिएको जानकारी गराएका छन ।
चक्रपथमा बढदो फोहर र धुलोले स्थानीय बासिन्दा एवं अन्यलाई पनि गम्भीर असर पारेपछि बागमति सफाईमा लागेका अभियान्ताहरु चक्रपथ सफाई अभियानमा पनि क्रियाशील हुन थालेको बताइएको छ । बैठकमा महानगरपालिका , सशस्त्र प्रहरी , नेपाल प्रहरी , यति हेलथ साइन्स एकेडेमी कलेज , होटल ब्यबसायी, स्थानीय बासिन्दा, लाइन्स क्लब लगायतका सामाजिक सस्थाहरुको सहभागिता रहेको छ ।
ग्रिनसिटी अस्पतालका अध्यक्ष लोकबहादुर टण्डनले टोल सफाइ र आपनो क्षेत्रको सफाइ आफै गर्ने र अस्पतालमा कम जाने बाताबरण बनाउन आग्रह गरेका छन । जति फोहर आफ्नो क्षेत्रमा बढ्यो त्यति नागरिकहरुमा रोग लाग्ने भएको अध्ययनले देखाएकाले पनि सफाईलाई प्राथमिकता दिईएको हो ।
चक्रपथ सफाइ अभियान प्रारंभ भएपछि चक्रपथको सडक नजिक छड , रोडा , ढुुगा बालुवा , सिमेण्ट एवं अन्य कुनै पनि ब्यापारिक समान राख्न नपाइने भएको छ ।
मन्त्री केसीले चक्रपथ सफाई प्रारंभ भएकोमा खुशी ब्यक्त गर्दे यस अभियानमा सबै सहभागी हुन आह्वान पनि गरेका छन । अब देखि प्रत्येक शनिबार चक्रपथ सफाई अभियानले निरन्तरता पाउने भएको छ । अभियानमा बरिष्ठ पत्रकार टंक पन्त , कलाकार तिलक बस्नेत लगायतले फोहर सार्बजनिक ठाउमा नराख्न आग्रह गरेका थिए ।